Abwaan/Mullaxamiiste Cabdikariin Faarax Qaarey (Jiir) oo Muqdisho ku geeriyooday – Voice of Somalis In Exile
Axad, 13th of Febraayo, 2022 (Muqdisho) Waxaa goordhow ku geeriyooday magaalada Muqdisho, ee caasimadda Soomaaliya, allaha u naxariistee, abwaankii ku caan-baxay luuq-curinta heesaha ugu badan ee Soomaaliyeed, Cabdikariin Faarax Qaareey oo lagu naaseeysi jiray (Cabikariin Jiir).
Marxuum Jiir oo muddooyinkii ugu dambeeyay xanuun uu la dhul-jiifo uu haayey ayaa saakayto ku geeriyooday isbitaalka Digfeer, ka dib, markii daaweyn lagu waday in dibadda loogu qaado ay suurtageli weyday.
Luuq-curiye Cabdikariim Jiir, ayaa taariikh dhaxal-gal ah kaga tagay quruxda, qiimaha fanka iyo masraxiyadda Soomaaliyeed, wuxuuna ku biiray fanka sanadkii 1962-dii, isaga oo xilligaa qeyb ka noqday, fanaaniin saldhigoodu uu ahaa radiyoow Muqdisho.
Mullaxamiiste Cabdikarim Jiir ayaa lagu tiriyaa in uu yahay mid ka mid ah abwaanadda allifay, laxanka heesaha ugu badan ee Soomaaliyeed, waxaana heesihii uu luuqda u sameeyey qaadad, fannaaniin badan oo safka hore kaga jiray fanka Soomaaliyeed, hormuudna u ahaa masraxiyadda quruxda badan ee Soomaalida.
Allaha u naxariisto Abwaan/Luuq-curiye Cabdikariim Faarax Qaareey (JIIR).
AminaWehelie.Me- Codka soomaalida Hayaantay (The voice of Somalis in Exile)